Waa maxay jaranjarada sideese loo fasirtaa | Saadaasha Shabakadda
Hadaad aragto saadaasha hawada badanaa waxaad maqashay erayga jaantus. Waa qalab si ballaaran loogu adeegsado saadaasha hawada si uu u matalo labada doorsoome ee ugu isticmaalka badan: roobka iyo heerkulka. Shaxanka cimilada waa wax aan ka badneyn garaafka ay labadan doorsoome ka wakiil yihiin oo qiimahoodu ku dhisan yahay.
Ma rabtaa inaad ogaato sida jaantusyada cimilada u shaqeeyaan iyo inaad barato sida loo fasiro? Qoraalkan waxaan si buuxda kuugu sharxeynaa 🙂
1 Astaamaha shaxda cimilada
2 Qalab la adeegsaday
3 Macluumaad lagu daray
4 Faallada jaantuska cimilada
5 Climograph-ka badda Mediterranean
6 Jaantuska cimilada Equatorial
7 Cimilada Kulaylka
8 Cimilada Qaaradaha
9 Jaantuska cimilada Oceanic
10 Jaantus Polar
11 Sida loo sameeyo shaxda cimilada
Astaamaha shaxda cimilada
Eraybixinta cilmiyaysan waxaa ka saxan in loogu yeero garaafka noocan ah sida jaantus 'ombrothermal'. Sababta oo ah "ombro" waxaa loola jeedaa roob iyo heerkulka kuleylka. Si kastaba ha noqotee, bulshada guud ahaan waxaa loogu yeeraa "climogram". Isbeddelada ugu muhiimsan ee lagu tilmaamo cimiladu waa roobka iyo heerkulka. Sidaa awgeed, jaantusyadani waxay muhiim u yihiin saadaasha hawada.
Xogta ka muuqata jaantuska waxaa lagu soo ururiyaa xarunta cimilada. Celceliska qiimaha ayaa la matalayaa bil kasta si loo ogaado isbeddellada iyo in xogtu muhiim tahay. Si loo diiwaan geliyo isbeddellada iyo habdhaqanka cimilada, xogta waa in la diiwaan geliyaa ugu yaraan 15 sano. Haddii kale ma noqonayso xogta cimilada, laakiin waa xogta saadaasha hawada.
Roobabku waxay muujinayaan wadarta roobabka la ururiyo bilaha loo qaybiyo tirada sannadaha. Sidan ayaad ku ogaan kartaa celceliska roobka sanadlaha ah ee meel. Maaddaama aysan had iyo jeer roob u da’in si isku mid ah ama isku xilli ah, celcelis ayaa la sameeyaa. Waxaa jira xog aan u adeegaynin aasaasida guud. Tan waxaa u sabab ah sannado aad u qalalan ama, liddi ku ah, roob badan. Sanadahan aan caadiga ahayn waa in si gooni gooni ah loo darso.
Haddii muuqaalka sannadaha roobku aad u da'ayo iyo sannadaha kale ee qalalan ay yihiin wax soo noqnoqda ama meerto ah, waxaa lagu darayaa cimilada aag. Matalaadda heerkulka ayaa inyar ku kala duwan xagga roobka. Haddii ay jirto hal leexasho oo keliya, celceliska heerkulka bil kasta waa la daaweynayaa. Tan waxaa lagu daraa oo loo qaybiyaa tirada sannadaha. Haddii ay jiraan seddex qaloocin, kan kore waa celceliska heerkulka ugu sarreeya, midka dhexe wadarta celceliska iyo kan hoose celceliska ugu yar.
Qalab la adeegsaday
Jaantusyada cimilada badankood waxay isticmaalaan tusmada uumiga Gaussen. Tilmaamahani wuxuu tixgelinayaa inay jirto heer qallalan oo qoyaan ah marka celceliska heerkulku ka sarreeyo laba jeer celceliska roobabka.
Sidan oo kale, jaangooyuhu wuxuu leeyahay qaab-dhismeedkan:
Marka hore, dhidibka abscissa ee bilaha sanadka la dejiyo. Kadibna waxay leedahay dhidibka wareegga midigta halka miisaanka heerkulka la dhigayo. Ugu dambeyntiina, dhidib kale oo dhinaca bidix ah, halkaasoo la dhigo miisaanka roobka oo laba jeer heerkulku yahay.
Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in si toos ah loogu fiirsado haddii ay jirto ubax marka qallalka roobabku ka hooseeyo heerkulka. Qiimaha cimilada waa inay noqdaan kuwo muhiim ah si loo ogaado qiimaha cabirka. Taasi waa, waa inaad siisaa xog kale sida rugta cimilada, wadarta tirada roobabka la cabbiro iyo celceliska heerkulka sanadlaha ah.
Muuqaalka jaantusyada cimilada dhamaadka way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran qiimayaasha. Nooca ugu caansan waa midka u taagan roobka iyadoo loo adeegsanayo baararka iyo heerkulka khadka cas. Tani waa tan ugu fudud. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar ka sii adag. Waxay ku saabsan tahay matalaadda roobka iyo heerkulka labadaba khadad buluug iyo casaan ah, siday u kala horreeyaan. Faahfaahinta sida hooska iyo midabaynta ayaa sidoo kale lagu daray. Waa midab huruud ah waqtiyada ugu badan ee oomanaha ah. Garaacis buluug ama madow waxaa la dhigaa xilli roobaadka oo ka yar 1000mm. Dhinaca kale, buluug daran bilaha roobku da'o in ka badan 1000mm waa midabbo.
Macluumaad lagu daray
Macluumaad intaas ka badan ayaa lagu dari karaa jaantusyada cimilada hadaan doono. Tusaale ahaan, ku darista macluumaad dheeri ah waxay naga caawin kartaa inaan ogaano xaaladaha cimilada ee dhirtu u adkeysato. Tani waxay noqoneysaa mid aad waxtar u leh marka laga hadlayo wax ku biirinta beeraha.
Jaangoynta ugu dhammaystiran ayaa loo yaqaan Jaantus Walter-Lieth. Waxaa lagu gartaa iyadoo heer kulka iyo roobabkaba lagu metelo xariiq. Waxay kaloo leedahay baar bilaha ka yar oo tilmaamaya inta jeer ee dhaxan ay dhacdo.
Macluumaadka dheeriga ah ee shaxdani leedahay oo kuwa kale aysan haynin waa:
nT = tirada sannadka ee u fiirsashada heerkulka.
nP = tirada sanadka ee u kuurgalaya roobka.
Ta = heerkulka ugu sarreeya ee ugu sarreeya.
T '= macnaheedu waa heerkulka ugu sarreeya ee dhammaystiran sannadle ah.
Tc = celceliska heerkulka ugu sarreeya maalin kasta ee bisha ugu kulul.
T = celceliska heerkulka ugu sarreeya.
Osc = oscillation kuleylka. (Osc = Tc - tf)
t = celceliska heerkulka ugu yar.
tf = celceliska heerkulka ugu yar ee maalinlaha ah ee bisha ugu qabow.
t '= celcelis ahaan heerkulka ugu hooseeya ee sannadlaha ah.
ta = heerkulka ugu hooseeya ee ugu hooseeya
tm = heerkulka celceliska. (tm = T + t / 2 ama tm = T '+ t' / 2)
P = celcelis ahaan roobab sanadle ah.
h = celcelis ahaan saacado qorraxeed sanadle ah.
Hs = dhaxan aamin ah.
Hp = dhaxan suurtagal ah.
d = maalmo dhaxan la'aan.
Aagga madow waxay ka dhigan tahay inay jiraan biyo saa'id ah.
Aagga dhibcaha leh macnaheedu waa biyo yaraan ayaa jirta.
Jaantuska 'Thornthwaite' astaamaha cimilada waxaa lagu metelaa inay tahay dheelitirka uumiga uumiga.
Faallada jaantuska cimilada
Markaan aragno shaxda cimilada aag, ka faallaynteeda iyo tarjumadeeda waa mid fudud. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan eegno waa qalooca roobab. Taasi waa halka aan ku muujineyno wadarta roobabka iyo baahintooda sanadka iyo bisha oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan awoodi doonaa inaan ogaanno waxa ugu sarreeya iyo heerarka ugu hooseeya ee ay ahaayeen.
Hadda waxaan u jeesaneynaa inaan eegno qallooca heerkulka. Waa ta inoo sheegeysa heerkulka celceliska, oscillation kaamerada sanadlaha ah iyo qaybinta sanadka oo dhan. Waxaan falanqeyn karnaa bilaha ugu kulul uguna qabow waxaanan isbarbar dhigi karnaa heer kulka kuwa kale. Markaan u kuur galno isbedelka waxaan ogaan karnaa cimilada aag.
Climograph-ka badda Mediterranean
Cimiladayada badda Mediterranean waxay leedahay celcelis ahaan qiyamka roobka iyo heerkulka sanadlaha ah. Qiimayaashan waxaa lagu metelay garaafka cimilada si fikrad looga helo xogta sannad kasta. Waxaa badanaa lagu gartaa iyadoo leh qiime hoose roobab guud ahaan sanadka oo dhan. Kordhinta roobka waxaa la ogaan karaa bilaha jiilaalka iyo bilaha gu'ga, iyadoo ugu badnaan la heli karo bilaha Nofeembar iyo Maarso.
Xagga heer kulku, waa kuwo khafiif ah. Xilliga jiilaalka ha hoos u dhigin 10 ° C xagaagana waxay kudhowaad yihiin 30 ° C.
Jaantuska cimilada Equatorial
Dhinaca kale, haddii aan falanqeyno cimilada aagagga dhulbaraha, waxaan ka helaynaa xog kala duwan. Qiimaha roobabku way sarreeyaan sannadka oo dhan, sida heerkulku yahay. Waxaad u fiirsan kartaa roobka ugu badan ee ka badan 300mm iyo heerkulka waa la ilaaliyaa xasilloon sanadka oo dhan illaa 25 ° C.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka helnaa jawi roob badan, oo ugu badnaan la gaaro bilaha Juun iyo Julaay. Roobabkan sare waxay u sabab yihiin roobabka dabeecada leh: Jiilaalku waxay dhacaan inta lagu jiro xilliga kuleylaha, iyadoo loo daayo heerar sare oo roob ah.
Xagga heerkulka, wuu xasilloon yahay sanadka oo dhan qiyaastii 25 ° C.
Waxaan falanqeyn karnaa kiis ka duwan kuwii hore. Cimilada noocan ah heer kulka ayaa ka hooseeya kuwii hore. Xilliga jiilaalka waxay ka hooseeyaan eber iyo xagaaga ma gaaraan 30 ° C. Dhinaca kale, roobku wuxuu ku jiraa nidaam caadi ah.
Jaantuska cimilada Oceanic
Halkan waxaan ka heleynaa qiimayaasha roobka oo aad u hooseeya iyo heerkulka isbedbeddelaya. Xilliga kuleylaha way ka diirran yihiin. Si kastaba ha noqotee, waxay si aad ah hoos ugu dhacaan bilaha jiilaalka. Guud ahaan waa jawi caadi ah oo qalalan.
Cimilada noocan ahi gebi ahaanba way ka duwan tahay kuwa kale. Waxaa jira heerar yar oo roob ah badankooduna waa qaab baraf iyo baraf. Heerkulku aad buu u hooseeyaa sanadka oo dhan, aad iyo aad bay u badan tahay sidaas waxay joogayaan xilli dheer oo ka hooseeya eber darajo.
Jawigaan, roobabku waxay bixiyaan macluumaad badan oo ku saabsan "taariikhda" meesha. Marka barafku da'o, wuu ururaa, oo sameeyaa lakabyo baraf ah. Kumanaan sano oo raasamaal ah, diir baraf ayaa la heli karaa oo na tusaya taariikhda meesha sannadahan oo dhan. Uruurinta barafka badan waxaa sabab u ah heerkulka aan u oggolaan karin inuu dhalaaliyo.
Sida loo sameeyo shaxda cimilada
Fiidiyowgaan waxaad ku baran kartaa tallaabo-tallaabo sida loo sameeyo shaxda cimiladaada ee aag:
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkaas oo dhan aad si wanaagsan ugu lafa-guri karto cimilada dhul kasta oo adduunka ka mid ah. Kaliya waa inaad istaagtaa si aad ubarbardhigto heerarka roobabka iyo heerkulka si aad u ogaatid, guud ahaan, cimilada aag. Mar alla markii aan ogaanno qiimayaashan, waxaannu dhex geli doonnaa kuwa kale sida dabaylaha iyo cadaadiska cimilada
Adiguna, weligaa ma aragtay shaxda cimilada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Waa maxay jaantuska cimilada sideese loo fasirtaa?